8Day's Bomb Questions - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
Bomb Questions - ပိုပို
ခံစားနေရတဲ့ ှStress တွေ တော့ရှိတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မတိုင် ပင်ဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ် ညစ်ပြီး ဝမ်းနည်းနေတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ Facebook မှာ ဒေါ သထွက်ပြီး စောင်းရေးတယ်။ အိမ် က ကလေးတွေကို ဒေါသထွက်ရင် သူတို့ကို မပြောချင်လို့ စောင်ရေး တယ်။ ခံစားရပြီဆိုရင် ငိုတယ်။
Written by	8Days Journal	 07 June 2019
Bomb Questions - ချောကလျာ
မရဲ့ အေးခဲသွားသူများ ဇာတ် ကား နမူနာတောင် မပြနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေမို့ ှအမနျျ များတယ်..
လက်ရှိ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတStress နဲ့ Pressure ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ရုံတင်ဖို့ကို အရမ်း Pressure တွေများနေပါတယ်။ ဆရာ နဲ့လည်းတိုင်ပင်ပါတယ်။ ပရိသတ် တွေကလည်း မရဲ့ အေးခဲသွားသူ များ မတင်သေးဘူးလား၊ အချိန်က နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပြီဆိုတော့ ကြည့်ချင်နေပြီလို့ လာမေးကြတယ်။ ကိုယ်ကလည်းဖြေနေတာပဲ။ နမူနာ တောင် မပြနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ ဆိုတော့ Stress များနေပါတယ်။
Written by	8Days Journal	 27 May 2019
Bomb Questions - နန်းထက်ထက်ဦး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲပျော် အောင်နေတယ်...
ဘဝမှာ အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတဲ့ Pressure ဆိုရင်တော့ စာမေး ပွဲကျတာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ Pressure မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲပျော်အောင် နေတယ်။
Written by	ကလောင်-ကျော်မျိုးနိုင်	 15 May 2019
Bomb Questions - သံသာမိုးသိမ့်
အိမ်က ယောက်ျားအတင်းပေးစားမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ
Q . အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Pressure ရှိတယ် ...
A .အခုအချိန်မှာရှိနေတဲ့Pressure ကတော့ အလုပ်ကိစ္စပါပဲ။ မိန်းမချောက ပရိသတ်လက်ခံလာ တော့ ပရိသတ်ဆီချပြချင်တဲ့ အရာ များလာတယ်။ အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတဲ့ Pressure ရှိတယ်။ အနုပညာ လုပ်တဲ့အခါ မဖြစ်သေး၊ မအောင် မြင်သေးတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ချင်ဇော Pressure များတယ်။
Written by	ကလောင်-ကျော်မျိုးနိုင်	 09 May 2019
BOMB Questions - ရဲနောင်
Q . ခုချိန်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Stress နဲ့ Pressure ဆိုရင် ...
A .အခုအချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ Pressure ကသုံးမျိုးရှိတယ်။ ပထမ တစ်ခုက Physically Pressure လောကကြီးကို ဖိနေတဲ့လေထု Pressure ၊ နောက်တစ်ခုက စိတ် အတွင်းက ဖိနေတဲ့ Pressure ၊ လူ တိုင်းကတော့ Pressure နဲ့ သွားနေ တဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ ကျွန်တော့်ကို နေ့တိုင်းတွန်းပို့နေတဲ့ စားဝတ်နေ ရေးဆိုတဲ့ အရာကြီးနဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ ဝါသနာကြီးက နောက်ကနေအမြဲ တွန်းနေတယ်။
Written by	ကလောင်-ငြိမ်းသဇင် 04 May 2019